အနမ်းဝိညာဉ်: August 2012
အကြင်လင် နှင့် မယားတို့ ကိုယ်စိတ်နှတ်ဖြာ ချမ်းသာစေ...
ღღღမိမိ အရည်အသွေးအား မိမိကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်သုံးသပ်...
အိန္ဒိယမှာ ဘုရားဆင်းတုတော်ကို ဖျက်စီးနေကြပုံ
ဦးခေါင်းတွင်စိုက်သော ၆ ပေရှည်သံချောင်း ဖယ်ရှားနို...
အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ (ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပေြး...
☆☆☆Mozilla Firefox (ခေါ်)Google ကို လှပတဲ့ပုံတွေအစာ...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မိကျောင်းမွေးမြူရေးစခန်းကို ထို...
စိတ်ပင်ပန်းသာတွေ ပြေစေဖို့ဟာသတော်များ
တောင်ပေါ်ဒေသ သာသနာပြု (သလူပြားကျေးရွာ)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ၀ိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်ပေးကြပါ.....
ကြည့်ချင်စဖွယ် ပုံဖော်ဖန်တီးမှုလေးတွေ.&တခြားအိုင်ဒီယာ အလန်းလေးတွေ....
1:47 am | Labels: ဓါတ်ပုံ
ပုံဖော်ထားတာလေးတွေ တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
credit : http://perierga.gr/
Eggplants, watermelons, apples, bananas and whatever else is in the kitchen came in sight of the artist ... and "transformed" into works of art! With detailed and carefully moves the Ilian Iliev demonstrated that sculpture in food is his specialty ...
How else to say this, when an eggplant is ... shoe andawatermelon transformed into spectacular flower? The least we can say is that these edible sculptures are visual amenity and not taste!
ပုံလေးတွေကို ကြည့် ပြီး သယ်ချင်းတို့ ကြည်နူးနိုင်ကြပါစေနော်......ပျော်စရာနေလေးပါ
1:37 am | Labels: ဘာသာရေး
အကြင်လင် နှင့် မယားတို့ ကိုယ်စိတ်နှတ်ဖြာ ချမ်းသာစေနိုင်သော နည်း ၇ နည်း
1:15 am | Labels: အချစ်
ဥပဒေသ အမှတ် ( ၁ )။ ။နားပူနဆာ မလုပ်ပါနှင့်
ဥပဒေသ အမှတ် ( ၂ )။ ။အကြင်လင်မယားတို့သည် တစ်ဦးကို တစ်ဦး ငြီးငွေ့အောင်မလုပ်သင့်ပါ
ဥပဒေသ အမှတ် ( ၃ )။ ။ဆူပူကြိမ်းမောင်းခြင်း မပြုပါနှင့်
ဥပဒေသ အမှတ် ( ၄ )။ ။စေတနာဖြင့် ချီးကျူးရန် မမေ့နှင့်
ဥပဒေသ အမှတ် ( ၅ )။ ။တဖက်သားကို ကြင်နာယုယ ပါ
ဥပဒေသ အမှတ် ( ၆ )။ ။ရိုသေလေးစားပါ
ဥပဒေသ အမှတ် ( ၇ )။ ။အိမ်ထောင်သည်တို့ ၏ ရာဂစိတ် ပြေငြိမ်းကြောင်း စာအုပ်ကောင်းကို ဖတ်ပါ
၁၉၉၃ ခု ဇွန်လတွင်ထုတ်ဝေသော် အမေရိကန်မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်တွင် အမ္မက်ကရိုဇီယာ ရေးသားသော `အိမ်ထောင်များ အဘယ့်ကြောင့်ပျက်ရသနည်း` ဆောင်းပါးတစ်စောင်ပါရှိလေသည်။ အောက်ပါမေးခွန်းတို့သည် ထိုဆောင်းပါးမှ ကောက်နုတ်၍ ဖော်ပြလိုက်ချင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမေးခွန်းများ ကို သင်ကိုယ်တိုင်ဖြေဆိုနိုင် အကျိုးရှိပေလိမ့်မည်။ `ဟုတ်ကဲ့` ဟု ဖြေနိုင်သော အဖြေတိုင်းကို အမှတ် ၁၀ မှတ်ပေးပါ။ အားလုံးကို ဖြေပြီးလျှင် သင်အမှတ်မည်မျှရသည်ကို တွက်ကြည့်ပါလေ။
၁။ သင်သည် သင်၏ မိန်းမကို မညားမီအခါက ဂရုစိုက်ခဲ့သကဲ့သို့ ယခုတိုင် ပန်းကလေးက အစ လက်ဆောင်ကလေးအစ ပေးလျက်ရှိပါသေးသလား။ မညားမီကကဲ့သို့ သင်၏ မိန်းမအပေါ်တွင် ကြင်ကြင်နာနာနှင့် ယုယ ထွေးပိုက်ခြင်းရှိပါသေးရဲ့လား။
၂။ အခြားလူများရှေ့တွင် သင့်မိန်းမကို ပြစ်တင် ဆူပူကြိမ်းမောင်းခြင်း မျိုးမှ အထူဂရုစိုက်ကာ ရှောင်ရှားပါရဲ့လား။
၃။ သူ သဘောကျ သလို သုံးစွဲနိုင်ရန် သင့်မိန်းကို အိမ်စရိတ် အပြင် ငွေပိုများ ပေးပါရဲ့ လား။
၄။ သင့်မိန်းမ၏ လိုအင်ဆန္ဒတို့ကို ကောင်းစွာ သိရှိအောင် သင်ကြိုးစားပါရဲ့လား။ သင့်မိန်းမသည် ပင်ပန်းနွမ်းလျက်ရှိသောအခါ ၌ လည်းကောင်း၊ စိတ်မအီမသာ ဖြစ်နေသောအခါ ၌ လည်းကောင်း သင်သည် သင့်မိန်းမကို အကူအညီပေးပါရဲ့လား။
၅။ သင်သည် သင်ရသော အားလပ်ချိန်ကို တစ်ဝက်ခွဲ ၍ သင့်မိန်းမနှင့် အတူတူ ကြည်ဖြူစွာ နေထိုင်ပါရဲ့လား။
၆။ သင့်မိန်းမ ၏ အချက်အပြုတ်နှင့် အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် သင်၏ မိခင် (သို့) ကိုဖြူ့ ၏ မိန်းမ အချက်အပြုတ် အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်း မှု့ထက် ညံ့သည်ဟု မပြောပဲ ပို၍ကောင်းသည် ဟု အလိမ္မာဖက်ကာ ယှဉ်ပြပါရဲ့လား။
၇။ သင်မိန်းမ ဖတ်ကြားသောစာအုပ်များ သင့်မိန်းမ၏ အပေါင်းအဖော်များ မြို့ရွာအရေး နှင့် စပ်လျှင်း ၍ သင့်မိန်းမ၏ ယူဆချက်များပေါတွင် သင်သည် အသေအချာ စိတ်ဝင်စားပါရဲ့ လား။
၈။ သင်သည် သ၀န်ကြောင်သောစကားမျိုးကို မသုံးပဲနှင့် သင့်မိန်းမအား အခြားယောက်ျားများနှင့် စကားပြေဆိုသည်ကို လည်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေတို့၏ ဘာဝ ဂရုတစိုက်ပြုသည်ကိုလည်းကောင်း ခွင့်ပြုနိုင်ပါရဲ့လား။
၉။ အခွင့်အလမ်းများပေါ်တိုင်း သင့်မိန်းမကို ချီးကျူးရန်နှင့် မြှောက်စားရန် သင့်မှာ အသင့်ရှိပါရဲ့လား။
၁၀။ သင့်အင်္ကျီ ကြယ်သီးပြုတ်နေသည်ကို ပြန်တပ်ပေးခြင်း၊ သင့်ခြေအိတ်ပေါက်နေသည်ကို ဖားပေးခြင်း၊ သင့်အ၀တ်အစားများလျှော်ဖွတ်ပေးခြင်း စသောအလုပ်လေးများအတွက် သင်သည် သင့်မိန်းမအား ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါရဲ့လား။
၁။ သင့်ယောက်ျား၏ အလုပ်တွင် ၀င်မစွက်ပဲ သီးသန့်နေပါရဲ့လား၊ သူ့အပေါင်းသင်းများကို ဘယ်သူနဲ့ မပေါင်းပါနဲ့၊ ဘယ်သူဟာ လူရှုပ်ပဲ အစရှိသဖြင့် အပြစ်ပြောခြင်း၊ သူ့အလုပ်လက်ထောက်ကို ခန့်ထားရာ၌ ၀င်ရောက်ပြောဆိုခြင်း၊ သူသွားရောက်လည်ပတ်ရာ၌ ဆူပူခြင်းများမှ ကင်းလွတ်ပါရဲ့လား။
၂။ သင့်နေအိမ်နှင့် တကွ သင့်အပေါတွင် သင့်ယောက်ျားသည် စိတ်ဝင်စားအောင် သင်သည် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပါရဲ့လား။
၃။ ယနေ့တော့ ဟိုဟင်းကြီးစားရအုံးမှာပဲ ဟူ၍ စိတ်ထဲမှာ မတွေးနိုင်အောင် စားဖွယ်သောက်ဖွယ် အမျိုးမျိုးတို့ကို သင်ကိုယ်တိုင် စီမံ၍ သင့်ယောက်ျားအား ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပါရဲ့လား။
၄။ သင့်ယောက်ျားသည် သူ့အလုပ်အတွက် သင့်ထံမှ အကူအညီလိုချင်ခဲ့ပါလျှင် အကူအညီပေးနိုင်အောင် သင့်ယောက်ျား၏ အလုပ်အေကြောင်းကို သင့်လေ့လာပါရဲ့လား။
၅။ စီးပွားပျက်သောအခါ ဘယ်သူတွေလုပ်လိုက်တာ ဘယ်လိုချမ်းသာသွားတာပဲ၊ သူ့လုပ်ပုံကို ကဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ အစရှိသဖြင့် သင့်ယောက်ျားကို ဆူပူခြင်း မလုပ်ပဲ အေးအတူ ပူအမျှ ခံနိုင်သော သတ္တိ သင့်မှာ ရှိပါရဲ့လား။
၆။ သင့်ယောက်ျား၏ မိခင်နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဆွေမျိုး ဉာတိများနှင့် သော်လည်းကောင်း၊ သင့်တင့်ညီညွတ်စွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ရန် ကြိုးစားပါရဲ့လား။
၇။ အ၀တ်အစားဝတ်ရာ၌ လည်းကောင်း သင့်ယောက်ျား မကြိုက်သော အဆင်နှင့် အ၀တ်အစားများကို ရှောင်ရှားပြီးလျှင် သင့်ယောက်ျးကြိုက်သော အဆင်နှင့် အ၀တ်အစားများကို ၀တ်ဆင်ပါရဲ့လား။
၈။ လင်မယားခြင်း သင့်မြတ်စွာပေါင်းသင်း ဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက် အနည်းငယ် သဘောကွဲလွဲချက်များကို သင်သည် လျှော့ပေးပါရဲ့လား။
၉။ သင့်ယောက်ျားနှင့် အားလပ်ချိန်များတွင် အတူတူ နေနိုင်ရန် သင့်ယောက်ျား ၀ါသနာပါသော အားကစားများကို သင်ကြားထားပါရဲ့လား။
၁၀။ သင့်ယောက်ျား၏ ပါရမီကို ကူညီသောအားဖြင့် နေ့စဉ် သတင်ထူး၊ စာအုပ်များ အကြံသစ်များကို သင်ကိုယ်တိုင်စုဆောင်ပေးပါရဲ့လား။
အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားတိုင်း မိန်းမတိုင်း အထက်ပါမေးခွန်းများ အနက် မိမိတို့နှင့်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ဖြေပြီးလျှင် အမှတ် ၁၀၀ မရမချင်း မလျှော့သော လုံ့လဖြင့် အမှတ် ၁၀၀ ရနိုင်အောင်း ကြိုးစားကြပါစေသတည်း။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော အိမ်ထောင်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။
9:27 pm | Labels: နည်းပညာ
9:02 pm | Labels: ကျန်းမာရေး
သူငယ်ချင်းတို့ကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဝက်ခြံတွေကို နှိမ်နင်းပေးဖို့နည်းလမ်းတွေ ကြိုးစားပမ်းစား ရှာထားပေးပါတယ်။ ဈေးကြီးကြီးပေးရတဲ့ အလှကုန်တွေကို လှည့်မကြည့်ပါနဲ့တော့။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ စားစရာလေးတွေရဲ့ ပဉ္စလက်ဆန်တဲ့အစွမ်းတွေကပဲ သူငယ်ချင်းတို့ကိုလှအောင် ကူညီပေးမှာပါ။ အကုန်အကျလည်းအများ၊ ဓာတ်မတည့်မှာလဲမပူရ၊ လွယ်လည်းလွယ်၊ ထိလည်းထိရောက် ဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်။ စမ်းကြည့်ကြပါအုံး။
ပန်းသီးလေးရဲ့အစွမ်းနဲ့ သင့်အသားအရေကို ပြောင်းလဲရအောင်။ ပန်းသီးလေးကို ပါးပါးလှီးပြီး ရေနွေးပူလောင်းလိုက်ပါ။ ရေတွေကိုစုပ်ပြီး ပန်းသီးအသားလေးပိုနူးညံ့သွားပါစေ။ပြီးရင် ခဏအအေးခံထားပြီး ၀က်ခြံရှိတဲ့နေရာတွေပေါ်မှာ ကပ်ထားလိုက်နော်။ ဒီနည်းလေးက အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတွေ ထောက်ခံထားတဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ၀က်ခြံကို မြန်မြန်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ပန်းသီးအက်ဆစ်ရဲ့ နူးညံ့ချောမွတ်စေတဲ့အစွမ်းကို သူငယ်ချင်း အရမ်းကြိုက်သွား မှာ သေချာတယ်နော်။
“အသီးမှာသရက်”တဲ့။ သရက်သီးလေးကတော့ အကောင်းဆုံးအရသာကိုပေးသလို အသားအရေအတွက်လဲ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ မျက်နှာအသားအရေကို ထိန်းသိမ်းတာကို ဆိုင်မှာအကုန်အကျခံပြီး သွားလုပ်စရာမလိုပဲ အိမ်မှာပဲလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလေးပဲလေ။ သရက်သီးကို အခွံခွာပြီး သရက်သီးအသားတွေကို ခရင်းနဲ့ ကြေညက်အောင် ချေပေးပါ။ ပြီးတော့ ရလာတဲ့အနှစ်ကို မျက်နှာအနှံ့လိမ်းပြီး စက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန်သေချာလေးနှိပ်ပေးနော်။ ၅-၁၀မိနစ်ကြာရင် ရေနဲ့သေချာဆေးချလိုက်ရုံပါပဲ။ မျက်နှာလေးက သန့်စင်ချောမွတ်ပြီး ချွေးပေါက်တွေပါ ကျဉ်းသွားပါလိမ့်မယ်။
သံပုရာသီး နဲ့ ဒိန်ခဲ
ဒီနှစ်မျိုးကလည်း သင့်ရဲ့ဝက်ခြံပြသနာကို ကူညီပေးနိုင်တယ်နော်။ ဒိန်ခဲနဲ့သံပုရာရည်လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းစာစီ ကို ရောမွှေလိုက်ပါ။ ရလာတဲ့အနှစ်လေးတွေကို ၀ါဂွမ်းနဲ့ဆွတ်ပြီး ၀က်ခြံပေါ်ကပ်ထားလိုက်ပါ။ မျက်နှာတပြင်လုံး မလုပ် ရဘူးနော်။ ဒီနည်းလေးကို တစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်ရင် ၀က်ခြံတွေ တဖြည်ဖြည်းပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်၊
ရေနွေးကြမ်း နဲ့ မုန်လာဥနီ
ဒီနှစ်မျိုးအတွဲက နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းမှာပဲနော်။ ဒါပေမဲ့ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ ထောက်ခံချက် ရထားတဲ့နည်းလေးပါ။ အနေတော်မုန်လာဥနီတစ်လုံးကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ပြုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ရေနွေးကြမ်း နဲနဲနဲ့ရောပြီး ညက်အောင်ချေပေးပါ။ သေချာကျေညက်တဲ့ အနှစ်လေးတွေ ရပြီဆိုရင်တော့ ၀က်ခြံတွေပေါ်အုံလိုက်ပါ။
အရွယ်တော်လိမ္မော်သီးတစ်လုံးကို အရေညှစ်ပြီး ကြက်ဥအကာနဲ့ ရောမွှေလိုက်နော်။ ရလာတဲ့အနှစ်ကို ၀က်ခြံပေါ် အုံပြီး ၁၅ မိနစ်ထားပါ။ ပြီးတော့ ရေဆေးချတာနဲ့ ၀က်ခြံက ရောင်တာရော နာတာပါ သက်သာသွားစေတဲ့အတွဲလေးပါ။
ခု ဒီနည်းလေး ၅ မျိုးကို အရင်စမ်းကြည့်အုံးနော်။ ဒီလို စားကောင်းသောက်ဖွယ်လေးတွေ..
အဲလေ.. နည်းကောင်းလေးတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်နော်။
အော်.. လောကြီးပြီး မျက်နှာမသစ်ပဲ မလုပ်လိုက်နဲ့နော်။ အပေါ်က နည်းတွေအားလုံးကို မျက်နှာသစ်ပြီးမှ လုပ်ရမှာပါ။ သဘာဝသစ်သီးတွေရဲ့ အစွမ်းကို သူငယ်ချင်းတို့ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ “မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား” တဲ့။
တကယ်လည်း စားလို့ရတာတွေပါပဲ။ :P ၀က်ခြံရဲ့ သားကောင်အဖြစ်က အမြန်လွတ်နိုင်ပါစေ သူငယ်ချင်းတို့။
9:01 pm | Labels: မှတ်သားစရာ
ღღღမိမိ အရည်အသွေးအား မိမိကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်းღღღ
7:14 pm | Labels: မှတ်သားစရာ
လူတစ်ယောက်က လမ်းဘေးဖုန်းဆိုင်မှာ ဖုန်းလာဆက်တယ် ။ ဖုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်း မသိလိုက် မသိဘာသာ
ဖုန်းဆက်သူ - “ ဟလို မခင်မြင့် လားခင်ဗျ -- အော် ဒီလိုပါ ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်စုံစမ်းချင်လို့ပါ မခင်မြင့် ခြံ
ထဲက မြက်တွေရှင်းဖို့ ကျွန်တော့်ကိုအလုပ်တစ်ခုလောက်ပေးနိုင်မလားခင်ဗျ ”
ဖုန်းဆက်သူ “ မခင်မြင့်ရေ ဒီလိုလုပ်ပါလားခင်ဗျ အခု မခင်မြင့်ဆီမှာ လုပ်နေတဲ့ မြက်ခင်းပြင်ရိတ်တဲ့သူထက်
ကျွန်တော်က တစ်ဝက်လျော့ယူပါ့မယ် ကျွန်တော့်ကို အလုပ်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျ ”
ဖုန်းဆက်သူ ( သည်းခံ နှိမ့်ချသောလေသံဖြင့် ) “ မခင်မြင့်ရေ ဒါဆိုလည်း ကျွန်တော့်ကို
အဲဒီအလုပ်လေးပဲပေးပါခင်ဗျာ ကျွန်တော် အိမ်တစ်ခုလုံးရဲ့ကြမ်းပြင်နဲ့ လှေကားတွေကို ပိုက်ဆံမယူပဲ
ဖုန်းဆက်တဲ့လူရဲ့မျက်နှာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ဖုန်းခွက်ကို ပြန်ချထားလိုက်တယ် ။ ဖုန်းဆိုင်ပိုင်
ရှင်က ဖုန်းဆက်တဲ့သူဆီလျှောက်လာတယ် ။
ဖုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင် “ လူလေး မင်းရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကိုငါသဘောကျတယ် ဒီလို အကောင်းမြင် စိတ်နဲ့
အလုပ်တစ်ခု ရဖို့ ကြိုးစားတာကိုငါသဘောကျတယ် မင်းကို ငါအလုပ်ပေးချင်တယ် ”
ဖုန်းဆက် သူ “ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို ကိုယ့်ဘာသာစမ်းသပ်ကြည့်တာပါ တ
ကယ်တော့ ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်နေတဲ့အလုပ်ရှင်ဆီမှာ ကျွန်တော်က လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူပါ ”
“ အဲဒါကို မိမိ အရည်အသွေးအား မိမိကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း လို့ခေါ်တယ်-- လူဆိုတာ ကိုယ်လုပ်နေ
တဲ့အလုပ် ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာကို အမြန်တမ်း ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုရှိနေမှသာ တိုးတက်နိုင်မယ် ဒီလိုမှ
မဟုတ် ပဲ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရတဲ့အရာလေးနဲ့ပျော်နေရင်တော့ ကိုယ့်အရည်အသွေးဟာ ဘယ်တော့မှ
တိုးတက် လာမှာ မဟုတ်ဘူး ”
11:48 pm | Labels: နည်းပညာ
ိုထိုလင့်ကိုနှိပ်၍ ဇော်ဂျီ ၆၄ ဖောင့်ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးသောအခါ Winrar.exe ဖြင့် ပြန်လည် ဖြေယူလိုက်ပါ။ ထို့နောက် စက်ထဲတွင် အင်စတောလုပ်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်ပြီးသောအခါ သင့် အနေဖြင့် Run ပေးရမည်။ သို့မဟုတ် ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်ကို Double Click ၂ ချက် နှိပ်လိုက်ပါ.. သင့်စက်ထဲတွင် ဇော်ဂျီဖောင့်စနစ်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ စောစောက Winrar ဖြင့် ဖြည်ထားသော zawgyi keyboard L setup ဖိုင်ကိုရှာ၍ ဖွင့်လိုက်ပါ.. ထိုဖိုင်ထဲတွင်
တို့ကို တွေ့ရမည်။ မိမိစက်တွင် သင့်တော်မည့် ဟာသာ ရွေးလိုက်ပါဗျာ.. သူက မတည့်ရင် အင်စတောလုပ်ခွင့်မပေးဘဲ error တစ်ခုခုပေးမှာပါ.. တည့်သွားတဲ့အခါ အလိုလို ဆက်လက်ပြီးဖောင့်ကို အင်စတောလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
32 ဘစ်သမားများအတွက်အထက်က ပေးထားသော လင့်တွင် winrar ဖြင့်တင်ပေးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ. .တိုက်ရိုက် exe ကို တင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် သင့်စက်တွင် ဒေါင်းလုပ်ပြီးပါက တစ်ပါတည်း အင်စတောလုပ်သွားရန် Run သို့မဟုတ် Save ကိုတောင်းပါလိမ့်မည်။
Save ကိုအရင် လုပ်ပြီးမှ Run ခြင်းက ပိုမို ကောင်းမွန်ပါသည်။
၀င်းဒိုးသုံးသူများအတွက် အထက်ပါ ဖောင့်များ မိမိစက်ထဲ ထည့်ပြီးသောအခါ ကီးဘုတ်ကို လည်း ထပ်မံ အင်စတောလုပ်ရန်လိုပါသည်။
- ပထမဆုံး Control Panel ကိုသွားပါ။
- ထို့နောက် Clock, Language and Region ကို ထပ်နှိပ်ပါ။
- Change keyboard or other input method ကို နှိပ်ပါ။
ွှ အောက်ပါပုံအတိုင်း အဆင့်ဆင့် ဆက်လုပ်လိုက်ပါ။
တစ်ခါတရံ ကီးဘုတ်သည် ဤ သို့ ဖြစ်တတ်သေးသည်။ သို့သော် ကိုယ်သုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာ နင်ဘာမိုလို့လဲ ဆိုပြီး ဒီအတိုင်းသာ ထပ်လုပ်ဗျာ.
နောက်ထပ် ကွန်ပျူတာမှာ ကီးဘုတ် သေးသေးလေး မြင်နေရဖို့လည်း ဒီလိုဆက်လုပ်ဗျ..
Linux Operation system နဲ့ Mac(Apple) အသုံးပြုသူများအတွက်
Mobile Phone များအတွက် ဒီနေရာမှာ ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါ့မယ်..
ဒါပေမယ့် အန်းဒရိုက် ဗားရှင်း 2.2 အထက်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းလေး စမ်းကြည့်ပါလားဗျာ. အဆင်ပြေတယ်လို့ ထင်တယ်ဗျ
ယခု မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် လမ်း ညွှန် လေး ဟာ end user တွေ အတွက် ဖြစ် ပါ တယ်။ ယခု လမ်း ညွှန် လေး ကို ဖတ် ပြီး ယူနီ ကုဒ် အသုံးပြု ဖို့အတွက် အထောက် ကူ ပြုတယ် ဆို ရင် ပဲ ကျေနပ် ပါ တယ်။ မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် စနစ် ဟာ နိုင်ငံ တကာISO အဖွဲ့ကြီး နှင့် ကမ္ဘာ့ ယူ နီ ကုဒ် အဖွဲ့ စည်း မှ စံ အြဖစ် သတ် မှတ် ပေး ထား ပြီး သား ကွန် ပြူတာ သုံး မြန်မာ စာ စနစ် ဖြစ် ပါ တယ်။ ယခု အချိန် ၌ မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် စနစ် သည် တည် ငြိမ် နေ ပြီ ဖြစ် ကာ Windows, Mac နှင့် iPhone တို့တွင် အဆင်ေပြေချာ မွေ့စွာ ဖတ် ရှုနိုင် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။ နောင် တစ် ချိန် မှာ လည်း နိုင်ငံ တကာ အသိ မှတ် ပြုပြီး ကွန် ပြူ
တာ သုံး မြန်မာ စာ စနစ် ဖြစ် လို့မည် သည့် ဒေသ တိုင်း ပြည် ကို ရောက် ရှိ သည် ဖြစ် စေ မြန်မာ စာ နှင့် မြန်မာ လက် ကွက် တွေ ဟာ ကွန် ပြူ တာ များ မှာ ပါရှိ လာ တော့ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ သို့ ဖြစ် ၍ မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် ကို စတင် အသုံးပြုလို သူ
အထက်ပါ font များကို Mysteryzillion.org က Font ဆိုတဲ့ Folder မှာ သွားရောက် ယူနိုင်ပါတယ်။
ယူနီကုတ် Font သွင်းခြင်း
Fonts Folder မှ သွင်းလိုသော Font ကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ပါ Install Font ကို နှိပ်ပြီး သွင်းနိုင်သည်။
( လက်ရှိ ဇော်ဂျီ UI ကေန font တွေအားလုံးက unicode default ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဇော်ဂျီနှင့် နာမည်ပေးထားသည်များ ဖတ်လို့ရတော့မည် မဟုတ် )
NHM ကီး ဘုတ် ဟာ အရင် က ဝင်း လက် ကွက်၊ ဇော်ဂျီ လက် ကွက် များ နှင့် ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင် သူ များ အတွက် ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီ ကီး ဘုတ် လေး ဟာ ဇော်ဂျီ လက် ကွက် အသုံးပြု ပုံ နှင့် ဆင် တူ ပါ တယ်။ ပါဋ် ဆင့် တွေ ရိုက် တာ ကို လည်းဇော် ဂျီ အတိုင်း Tilde ~ key ကို အသုံးပြုပြီး ရိုက် လို့ ရ ပါ တယ်။ NHM ကီး ဘုတ် ဆော့ဖ် ဝဲ ဟာ New Horizon Media ဆို တဲ့ ကုမ္ပဏီ က အခ မဲ့ ဖြန့် ဝေ တဲ့ ဆော့ဖ် ဝဲ ဖြစ် ပြီး ဒီ ကီး ဘုတ် ရဲ့ မြန်မာ လက် ကွက် ကို တော့ ကို ရာ ဗီ ကစည်းမျဉ်း ပေါင်း တစ် သိန်းကျော် ပါဝင် တဲ့ Keyboard File ကို ရေး ပေး ထား တာ ပါ။
ုကီးမက်ဂျစ် အသုံးပြုလိုသူများအတွက် အောက်ပါအတိုင်းလေး အဆင်ပြေသည်။
လူတွေ အဓိက အသုံးများတဲ့ Major Browser ၂ခုဖြစ်တဲ့ IE and Fire Fox တွေမှာ မိမိစက်ထဲမှာယူနီကုဒ်ဖောင့် မရှိပင် မရှိသော်ငြားလဲ ဖတ်လို့ရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။
အဲဒီကမှတဆင့် ပွင့်လာတဲ့ Dialogue Box ထဲကမှ General Tab အောက်က Accessbility Button ကိုနှိပ်ပေးပါ။ အောက်ကပုံမှာ ပြထားပါတယ်။
ဘလော့တွေ ဖတ်မရဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုရင် ဟုတ်ပါတယ်။ သို့သော် မိတ်ဆွေအေနနဲ့ ဘာလုပ်လို့ရနိုင်သလဲဆိုရင် ဇော်ဂျီနောက်ဆုံးဗားရှင်းကို စက်ထဲ သွင်းလိုက်ပါ၊ ပြီးနောက် Mozilla Fire Fox နဲဖတ်ရင် ဇော်ဂျီသုံးသော ဘလော့တွေကို ဆက်ဖတ်လို့ ရနေမှာပါ။ ဘလော့ တစ်ခုဖတ်ဖိုအတွက် ငါ့ IE ကို မပြောင်းပေါင်ဆိုလည်း
နောက်ဘရိုစာ တစ်ခုအနေနဲ့ Google Chrome ပါ။
- ခရုန်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ညာဘက် အပေါ်ဘက်နားမှာ ဂွ ပုံသဏ္ဍန် တစ်ခု ကိုတွေ့ပါမယ်.
- အဲဒိဂွကို နှိပ်လိုက်ပါ.. ပြီးတော့ အောက်က ကျလာတဲ့ စာတွေထဲက setting ကို ရွေးဗျာ.
- ပြီးတော့ စာမျက်နှာရဲ့ အပေါ်မှာ လေးထောင့်လေးနဲ့ Search setting ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ font ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်
- ဒီလိုပေါ်လာမယ် ဒီလိုဆက်လုပ်ပါ.. အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။
အပေါ်က ဇော်ဂျီတွေပြောင်းပြီးသကာလ အောက်ဆုံးမှာတော့ ယူနီကုတ် - utf-8 လေးကို ပြောင်းပြီး အိုကေသာ နှိပ်လိုက်တော့ဗျာ.. မြန်မာစာဖောင့် ဖတ်လို့ ရေးလို့ ရသွားပါမယ်။
ယေူနီကုဒ်စံသုံး ဘေလာ့များနှင့် ဇော်ဂျီဖောင့်သုံး ဘေလာ့များကို မည်ကဲ့သို့ အဆင်ပြေပြေ ဖတ်နိုင်မည့်အကြောင်း စာဖတ်သူဖက်မှ ယခုကဲ့သို့ လုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခြင်း ဖြစ်ရပါတယ်။
အသေးစိတ်ကို KeyMagic Developer ကိုသန့်၊သက်ခင်ဇော်ရဲ့ blog မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဖောင့်အင်စတောအတွက် microsoft Visual C ++ တို့ ကီးမက်ဂျစ်တို့ကို ဒေါင်းလုပ်ပီးလို့ ကီးမက်ဂျစ်ကို အင်စတောလုပ်ပီးသောအခါ ကွန်ပျူတာရဲ့ desktop ပေါ်မှာ ကီးမက်ဂျစ် အိုင်ကွန်လေး တင်ထားလိုက်ပါ။ စက်ဖွင့်ပြီးသော် အဲဒိကီးမက်ဂျစ်အိုင်ကွန်လေး ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက် ဘောက်နားမယ် keymagic ဆိုတာလေးပေါ်နေမယ်. .အဲဒါကို နှီပ်ပြီး မိမိအလိုရှိရာဖောင့်ကို ရွေးယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မရရင် MITT သာ သွားပြီး ကိုဝှူးကို နားညီးအောင်လုပ်ဗျာ. သူလည်း အဲဒိ ဖောင့်ကိစ္စနဲ့ တစ်နှစ်နီးပါး အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး ဒိုင်ခံဖြေရှင်းပေးနေပါတယ်။ ယူနီကုတ်ကို ပြောင်းသုံးဖို့ သင့်ပါပြီလို့ ကျွန်တော် ကိုသန့် တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် မိတ်ဆွေတို့..
ကျွန်တော် ရေးသားထားသည်များ ကူးယူထားသည်များသည် မြန်မာစာဖောင့်အတွက် ပြည့်စုံချင်မှလည်း ပြည့်စုံပေလိမ့်မည်။ လိုအပ်လျှင် လူကြီးမင်းများ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။။